Madaxweyne ku xigeenka Kenya Oo loo dabamaray Xafiiskiisa lana Isticmaalay – Radio Baidoa
Madaxweyne ku xigeenka Kenya Oo loo dabamaray Xafiiskiisa lana Isticmaalay
By Webmaster	 On Feb 17, 2020
Madaxweyne ku xigeenka Kenya William Ruto ayaa iska fogeeyay siyaasi wasiir horay usoo noqday oo loo heysto inuu xafiiskiisa u adeegsaday khiyaano uu ku dhici rabay lacag.
Ruto ayaa sheegay Rashid Echesa, oo ahaa wasiirkii hore ee ciyaaraha Kenya uu isticmaalay xafiiskiisa oo cidlo ah, sida uu shaaciyay telefishinka Citizen.
Tan iyo isbuucii lasoo dhaafay waxaa dalka Kenya si weyn looga hadal hayaa fadeexadda ku saabsan qalabka milatariga, taasoo la damacsanaa in lagu lunsado 39 bilyan oo shilinka Kenya ah, oo u dhiganta ku dhawaad $400 oo milyan oo doolar.
Mr Echesa ayaa lagu soo oogay dacwad ku saabsan inuu si khiyaano ah shirkado ula heshiinayay, isagoo u sheegayay in loo baahan yahay qalab milatari oo ku kacaya qiimahaas.
Maxkamad maanta oo isniin ah la geeyay ayaa kusii deysay damiin lagaceed oo gaaraya $10 kun oo doolar.
Ninkan oo wasiir hore ahaan jiray ayaa lagu eedeeyay inuu sidoo kale been abuurtay saxiixa haweeneyda wasiiradda difaaca ka ah Kenya, Dr Monica Juma, si uu qolyaha shirkadda gacansiga ah ugu qanciyo inay qandaraaska rumeystaan.
Wararka ayaa sheegaya in Mr Echesa uu hormaris ahaan u helay in ka badan $100 kun oo doolar.
Mr Echesa ayaa maxkamad lala soo taagay eedeysaneyaal kale oo lagu kala magacaabo Daniel Otieno, Clifford Okoth iyo Kennedy Oyoo waxaana lagu soo oogay 12 dacwadood oo la xiriira isku day musuqmaasuq.
Hase ahaatee dhammaantood way beeniyeen eedeymaha loo jeediyay.
Wasaaradda Gaashaandhigga ee Kenya ayaa dafirtay inay wax ka ogtahay fadeexadda qalabka milatari ee ku kacaya kharashka badan.
Qalabka qandaraaska been abuurka ah loo sameynayay ayaa laga dalbanayay shirkad fadhigeedu yahay dibadda.
Mr Echesa waxaa maalintii Khamiista ahayd xabsiga u taxaabay ciidamo ka tirsan laanta dambi baarista booliska ee DCI-da, isagoo loo heysto fadeexadda cusub ee soo ifbaxday.
Maalintii xigtay ee Jimcada ahayd ayuu kasoo hor muuqday maxkamadda fadhigeedu yahay garoonka Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi, iyadoo boolisku ay garsoorka weydiisteen in loo oggolaado 21 maalmood oo ay xabsiga ku hayaan si ay u dhammeystiraan baaritaanka ay ku sameynayaan.
Muuqaal laga helay kaamirada CCTV-ga ee ku xiran xafiiska madaxweyne ku xigeenka ayaa lagu xaqiijiyay labo ka mid ah xulafada Ruto oo halkaas ku sugnaa 13-kii bishan February, markaasoo Mr Echesa uu la kulmayay saraakiisha shirkadda qandaraaska la siinayay ee lagu magacaabo Echo Advanced Technologies, taasoo laga leeyahay Mareykanka.
Dr Ruto ayaa markii hore u muuqday inuu qiray kulanka mesha ka dhacay, wuxuuna sheegay inay jiraan dad kale oo fadeexaddan ku lug leh.
Sarkaal kasoo baxsadey Ururka Al-Shabaab oo lagu soo bandhigey Bakool Xudur
Daawo:-Gud Degmada Baydhabo oo Daahfuray Olalaha Wacigelinta Dib U Eegista Dastuurka dalka.